June 3, 2009, 8:27 am Filed under: Lin Let Kyal Sin, Trip ( Photo ; http://www.ecomaxmc.com/images/melaka.jpg )
မရောက်ဖူးသော ဒေသဖြစ်တာကြောင့် မြေပုံတစ်ခုနဲ့ GPS ခရီးသွားလမ်းညွှန်လေးတစ်ခုကို အားကိုးပြီး နှစ်ယောက်သား အလုပ်များလွန်းတဲ့ စင်္ကာပူကျွန်းမှ ထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။ စင်္ကာပူနယ်မြေထဲက ထွက်သွားတာနဲ့ ကားမောင်းသူများ အကျင့်စရိုက်လေးတွေ ကွာခြားတာကို သတိပြုမိခဲ့တယ်။ စင်္ကာပူမှာ ကားမောင်းသူအများစုဟာ စိတ်လုံးဝမရှည်သူ များပြီး တစ်စက္ကန့်တောင် စောင့်ဆိုင်းနိုင်ကြခြင်းမရှိပါဘူး။ မလေးရှားနယ်မြေဘက် အထူးသဖြင့် မြို့ထဲတွေမှာ အားလုံးဟာ ပုံမှန်လေးပဲ လှုပ်ရှားသွားလာကြရင်း အနည်းငယ်လေး စောင့်ဆိုင်းရတာ ၊ မတော်တဆ လမ်းလေးမှားသွားရင် ဟွန်းဆက်တိုက်တီးတာတွေ .. စိတ်တိုသောပုံစံတွေ မတွေ့ရဘဲ အားလုံးအေးအေးဆေးဆေးရှိကြတာကို သတိပြုမိရင်း ထိုအချက်ကလေး တစ်ချက်ကို ချီးကျူးမိပါတယ်။Melaka မြို့ထဲဝင်ဝင်ချင်းလေးမှာပဲ ဗိုက်ဆာလာတာနဲ့ စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုခုကို မနည်းရှာခဲ့ရတယ်။ ထိုင်းအစားအသောက်လို့ ကြေငြာထားတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်လေးမြင်မှ ထိုဆိုင်ကို ၀င်ကြည့်ခဲ့တယ်။ သိပ်သန့်ရှင်းသပ်ရပ်တဲ့ ဆိုင်အပြင်အဆင်လေးနဲ့ လှပသော အပြင်အဆင်လေးတွေကို ကြည့်ရင်း သဘောကျမိသွားတယ်။ တိုက်ဆိုင်မှုဖြစ်စွာ .. ကျွန်မတို့စားပွဲကို menu လာချပေးတဲ့ စားပွဲထိုး မိန်းကလေးက မြန်မာဖြစ်နေတယ်။ သူမနှင့်အတူ အလုပ်လုပ်နေသော အခြားမိန်းကလေးတစ်ယောက်လည်း မြန်မာလူမျိုးဖြစ်ကြောင်း ပြောပြတယ်။ သူမတို့နှစ်ဦးက ကျွန်မတို့ ဇနီးမောင်နှံကို ရင်းနှီးခင်မင်စွာ စကားပြောဆိုရင်း နောက်တစ်ခါ အလည်ထပ်လာဖို့ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်။
Comment by khet myint myint
June 3, 2009 @ 1:16 pm Reply	အခုလို အမြဲပျော်နိုင်ပါစေ
June 3, 2009 @ 4:07 pm Reply	မလက္ကာကို သွားချင်ခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါပေမဲ့ မရောက်ဖြစ်ဘူး။ အခုလို စုံစုံလင်လင် သိရတာ ကောင်းတယ်။ ညီမလေးက ချစ်သူနဲ့ဆိုတော့ ဘယ်နေရာသွားသွား ပျော်စရာချည်း ဖြစ်ရတာပေါ့လေ။ မြန်မာမလေးတွေ ရှိတဲ့ ထိုင်းစားသောက်ဆိုင်လေးက သန့်ရှင်းပြီး စားချင်စရာပဲနော်။
June 4, 2009 @ 4:47 am Reply	ညီမလေးရေ အမြဲရောက်ဖြစ်ပေမဲ့ ခြေရာမချန်ဖြစ်ခဲ့ဘူး………. ချစ်သူနဲ့သွားရတဲ့ဘာခရီးဘဲဖြစ်ဖြစ်ပျော်စရာကောင်းမှာပါ
Comment by မေလေး
June 4, 2009 @ 7:20 am Reply	ညီမလေးရေ…အမြဲတမ်းပျော်ရွှင်ပါစေ🙂
June 5, 2009 @ 1:44 pm Reply	u didn't visit jonker walk? there isafamous bar there.. u will like it..
June 10, 2009 @ 4:48 pm Reply	လာလည်ပါတယ်။ မေ၇ာက်ဖြစ်တာကြာပြီ။ အဆင်ပြေကြပါစေ ..လင်းနေဦးမယ့်ကြယ်စင်မောင်နှံရေ။
Comment by naythithmuu474
June 13, 2009 @ 12:05 am Reply	မလက္ကာကို ပြန်လွမ်းသွားတယ်။ ပထမတစ်ခါ သွားတုန်းက မရောက်ဖြစ်တဲ့ နေရာတွေ ကျန်သေးတယ်။ လောလောဆယ်တော့ မသွားနိုင်သေးပါဘူး။
June 16, 2009 @ 3:40 am Reply	ပျော်စရာကြီးးးး
June 18, 2009 @ 4:14 am Reply	thanks for sharing. I haven't read about Melaka trip in suchabeautiful way of presentation.
July 21, 2009 @ 6:35 am Reply	RSS feed for comments on this post.	TrackBack URI